Maxay yihiin qodobada la isku mari la'yahay ee shirka ka socda Dhuusamareeb? - Caasimada Online
Home Warar Maxay yihiin qodobada la isku mari la’yahay ee shirka ka socda Dhuusamareeb?
Maxay yihiin qodobada la isku mari la’yahay ee shirka ka socda Dhuusamareeb?
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug, Cali Daahir Ciid ayaa faah faahin guud ka bixiyey shirka wada-tashiga ee ka socda magaalada Dhuusamareeb, kaas oo looga hadlayo doorashooyinka dalka 2021-ka.
Mr. Ciid oo la hadlay BBC-da ayaa marka hore shaaca ka qaaday in ay jiraan qodobo weli la’isku mari la’yahay, sida arrinta guddiga doorashooyinka iyo tan gobolka Gedo.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in haatan kulamada ay sii socdaan, islamarkaana lagu guda-jiro sidii xal looga gaari lahaa qodobadaasi oo ka mid ah kuwa maranka dhaliyey.
“Qodobada qaar weli waa lagu wada jiraan oo ku saabasn guddiga doorashada iyo waxa laga tataaban karo iyo arrinta Gedo oo u dambeysa, markaa ilaa iyo hadda si habsami leh ayuu shirkaasi u socdaa,” ayuu yiri Cali Daahir Ciid.
Madaxwayne ku xigeenka maamulka Galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay rajo wanaagsan ka qabaan in xal waara laga gaaro muranka ka taagan arrinta guddiga doorashooyinka dalka, isaga oo tilmaamay in hadda la’isaga soo dhowaanayo intii hore.
”Sida muuqata aad ayey isugu dhaw yihiin labada dhinac marka laga hadlayo guddiyada doorashada,” ayuu markale yiri.
Dhinaca kale Cali Daahir Ciid ayaa hoosta ka xariiqay in is-faham laga gaaray qodobka ku saabsan soo xulida xildhibaanada gobollada waqooyi, sida uu hadalka u dhigay.
“Qodobkii ugu horreyay oo ah dhanka Somaliland inta aan ogahay is-faham aad u ballaaran ayaa laga gaaray, waxna way ka dhiman yihiin,” ayuu sii raaciyey.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo uu weli sii socdo shirka Dhuusamareeb 4 oo loo doonayo in xal mideysan looga gaaro muranka hareeyey doorashooyinka 2021-ka.